Uyigcina kwaye uyilawule njani ipassword kuGoogle Chrome ye Android | I-Androidsis
Ungagcina kwaye ulawule iiphasiwedi kuGoogle Chrome ye-Android
UAron Rivas | | Izaziso, Tutorials
I-Chrome ye-Android yenye yezona zikhangeli zilungileyo unokuzifumana. Oku kusivumela ukuba silawule imisebenzi emininzi ngendlela efanayo nendlela i-desktop version eyenzayo. Ukongeza, inika ithuba lokudibanisa iiakhawunti zikaGoogle kunye neenkonzo.
Omnye wemisebenzi eluncedo kakhulu yesi sicelo kukwenza lawula amagama okugqitha kunye neeakhawunti. Ukuba nangaliphi na ixesha usebenzise esi sikhangeli kwaye ungene kwiphepha, apho kuya kufuneka ufake ipassword, ngokuqinisekileyo uya kuyibona ibhokisi ebonisa ukuba kungenzeka ukuyigcina. Kulungile ke, emva kokuba ndikufundisile usebenze njani nge-block blocker kwi-Chrome, sicacisa ungagcina njani, ulawule kwaye uphonononge onke amagama okugqitha kwesi sikhangeli sinye, ukuba kunokwenzeka uzilibale.
Ungayigcina njani kwaye uyilawule njani ipassword yakho kwiChannel ye-Android
Nanini na xa sifaka idatha yeakhawunti kwisikhangeli seChannel, njengegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, isibonisa ibhokisi apho ibuza ukuba sifuna ukuyigcina na iphasiwedi, njengakulo mzekelo ungentla. Ukuba sithi ewe, iya kusigcinela yona ukuze sikwazi ukuyibona nanini na sifuna kwaye kungafuneki ukuba siyifake kwakhona ngesandla. Ke sinokubabona kamva:
Kuqala kufuneka uvule Google Chrome kwifowuni ye-Android.
Emva koko, cofa kumanqaku ama-3 abekwe kwikona ephezulu ngasekunene.
Emva koko uye ku Cwangcisa kwaye emva koko Iipassword. Apho uya kubona onke amagama agqithisiweyo agcinwe kwiGoogle Chrome. Ungazicima kunye nedatha yeeakhawunti ozifakileyo kwiindawo ezahlukeneyo.
Ukuba ufuna ukuqhubela phambili, kuya kufuneka wenze le nkqubo inye kwaye, wakube ungene Iipassword, Yiya e Jonga ulawule amagama agqithisiweyo agcinwe kwiakhawunti yakho kaGoogle. (Fumanisa: ukwenza uguqulelo oluzenzekelayo kwi chrome).
Ke Kuya kufuneka ufake idatha yeakhawunti ye-Gmail ukufikelela kweli candelo. Nje ukuba konke oku kwenziwe, sinokubaphatha ngokubanzi kwaye sibasuse.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ungagcina kwaye ulawule iiphasiwedi kuGoogle Chrome ye-Android
Beka iibhokisi mzuzu kanye ngoku kwi-Swing!
Ubomi bebhetri kwezinye iifowuni ezintsha buye bonakala xa kuthelekiswa nezangaphambili